I-Nubia Z18 iya kubhengezwa nge-5 kaSeptemba | I-Androidsis
Phakathi kwamahemuhemu amaninzi kunye nokuqikelela malunga ne-Nubian smartphone ezayo, Inkxaso-mali yeZTE ekugqibeleni ibhengeze isiphelo sayo esilandelayo, iNubia Z18, ngoSeptemba 5 olandelayo.
Oku ukwenzile ngoWeibo, Inethiwekhi yoluntu yaseTshayina, iindlela ezithi iinkampani zaseAsia zithande ukwenza izibhengezo, ezinje ngeMeizu, iHuawei kunye nezinye izinto ezaziwayo. Apho, ngepowusta, uNubia wazibhengeza ezi ndaba.
Ngokwiposti yeWeibo, I-Nubia Z18 iya kubhengezwa nge-5 kaSeptemba. Lo ngumhla ofanayo wokukhutshwa Hlonipha 8X, ukongeza kwezinye izixhobo, njengoko sikhumbula ukuba lusuku lokugqibela lwe-IFA eBerlin, eJamani, kwaye, kuwo wonke lo msitho, kuya kunikezelwa ngee-mobiles ezininzi. Ndiyabulela kwinto yokuba lo mhla ungqamana nale, kulindeleke ukuba i-terminal ibhengezwe kulo mboniso wetekhnoloji.
Ukubuza okungakumbi malunga nento uNubia asigcinele yona, ipowusta ibonisa umfanekiso wefowuni kwaye uyakuqinisekisa oko izakuza nenotshi encinci efana ne-PH-1 kunye ne Oppo F9.
Ngaphambili, uluhlu lwe-TENAA lwe-Nubia Z18 luveze ukuba ifowuni iya kuba nescreen se-5.99-intshi ye-diagonal FullHD + ngesisombululo sama-pixels angama-2.160 x 1.080 (18: 9).
Fumanisa: I-Nubia Z18 ibonakala kwi-Geekbench kunye nezinto zayo eziphambili
Kukwalindeleke ukuba ixhaswe yi Inkqubo yeQualcomm Snapdragon 845 nge-6 GB ye-RAM kwimodeli esisiseko kunye ne-8 GB ye-RAM kuhlobo oluphambili. Ukugcina kuya kuba yi-64GB kunye ne-128GB ngokwahlukeneyo. Okokukhanya, i-Nubia iya kuphumeza i-24MP kunye ne-8MP combo ngasemva, ngelixa i-8MP yesenzisi somfanekiso iya kuba kwindawo yenotshi ngaphezulu kwesikrini.
Okokugqibela, i-smartphone iza kuza nomfundi ophethe iminwe emva kunye netekhnoloji yokuqonda ebusweni. Ukongeza, yonke into yalatha izakufika nge3.350 mAh ibhetri kunye ne-Android 8.1 Oreo njengenkqubo yokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-ZTE iya kuzisa iNubia Z18 ngalo Septemba 5 uzayo
Ungawukhangela njani umsebenzi kuGoogle weMisebenzi kwisixhobo sakho se-Android